धर्तीमै स्वर्गको आभाष दिलाउने संसारका यी पाँच अपत्यारिला ठाउँ » Khulla Sanchar
धर्तीमै स्वर्गको आभाष दिलाउने संसारका यी पाँच अपत्यारिला ठाउँ
संसारभरी यस्ता ठाउँ पनि छन् जसलाई हेर्दा लाग्छ, यी ठाउँ काल्पनिक हुन् । तर निकै मनमोहक देखिने त्यस्ता ठाउँहरु वास्तवमा नै यसै धर्तीको हिस्सा हुन् । आज हामी तपाईंलाई यस्तै ठाउँबारे जानकारी दिँदै छौं ।
१. माउन्ट रोराइमा, भेनेजुएलाः
प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यहाँको दृश्यले मानिसहरुलाई हर हमेसा आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । संसारभरी यस्ता थुप्रै ठाउँहरुमध्ये भेनेजुयलास्थित माउन्ट रोराइमा नामको उच्च भागमा देखिन्छ । यो उच्च भागको वरिपरि बादल फैलिएको छ जसलाई हेर्दा लाग्छ कि यो स्वर्गको एक प्रवेशद्वार हो ।
माउन्ट रोराइमा दक्षिण अमेरिकाको पाकाराइमा पर्वत श्रृङ्खलाको टेपुइस (टेबलनुमा) पठारको सबैभन्दा अग्लो भाग हो । यो ३० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको कानाइमा राष्ट्रिय उद्यानमा अवस्थित छ । यो प्राकृतिक वास्तुशिल्पको अद्भूत नमुना हो । यसको आयु करिब दुई अर्ब वर्ष पुरानो आंकलन गरिएको छ ।
यसको सबैभन्दा पहिलो वर्णन अंग्रेज अन्वेषक सर वाल्टर रालिघको सन् १५९६ मा लेखिएको पाइएको छ । यो पर्वतमा भेजेजुयला, ब्राजिल र गुयानाको सीमा बिन्दु रहेको छ । यो उच्च भागको सुन्दरता त्यतिबेला बढ्छ जब यसको वरिपरि बादलको मोटो पत्र जम्मा हुने गर्दछ ।
२. माउन्ट ग्रिनेल, ग्लेसियर नेशनल पार्क, मोन्टानाः
माउन्ट ग्रिनेल अमेरिकाको मोन्टाना राज्यको नजिक माउन्ट गोल्ड र माउन्ट विल्बरको ग्लेसियर नेशनल पार्कको बिचमा एउटा पहाडको चुचुरोको रुपमा रहेको छ । जर्ज बर्ड ग्रिनेल नाम राखिएको यो ठाउँको अनुपम सुन्दरताले अनेकौं मानिसहरुको मन लोभ्याउने गर्दछ ।
३. रेतबा ताल, सेनेगलः
संसारको एकमात्र गुलाबी ताल रेतबा अमेरिकाको सेनेगलमा छ । यसको आकार ३ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । देख्दा निकै सुन्दर यो तालमा नुनको मात्रा अत्यधिक रहेको छ यसैकारण यहाँ बस्नेहरुले आफूलाई केही नोक्सानी नहोस् भन्नका लागि आफ्नो शरिरमा पूरा बटर लगाउने गर्दछन् । यो पोखरीको रंग सूर्यको प्रकाशसँगै परिवर्तन हुने गर्दछ । यो समुन्द्रबाट निस्कने नुन यहाँका मानिसहरुको मुख्य आयश्रोत हो । यसको पानीको रंग गुलाबी छ । पर्यटकहरु यहाँको दृश्य हेर्न निकै लालायित हुन्छन् ।
४. टूलिप फिल्ड्स, हल्याण्डः
टूलिप फिल्डमा तपाईंले भिन्न भिन्न रंगको लाइन देख्न सक्नुहुन्छ जसको बिचमा अचम्मित गरिदिने सेतो लाइन पनि देख्नसक्नुहुन्छ । यदि तपाईंलाई फूल राम्रो लाग्छ भने तपाईं केउकेनअफ गार्डनमा फुलेको फूलका कारण बनेको रंगीन दृश्यलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न । केउकेनअफ होल्याण्डको प्रमुख आकर्षणमध्येको एक हो ।
५. तियांजी माउन्टेन, चीन
संसारमा त्यस्ता केही ठाउँहरु छन् जुन कुनै रहस्यभन्दा कम छैनन् । यस्ता ठाउँहरु मानिसहरुलाई पनि निकै आकर्षित गर्ने गर्दछ । यी ठाउँहरुलाई प्रकृतिले आफ्नो पकडमा राखेको हुन्छ । चीनको तियांजी माउन्टेनमा यस्तै प्रकारको एउटा पहाड छ ।
मार्बलको ढुङ्गा भएको तियांजी माउन्टेन चीनको युन्नान प्रान्तको झंगजियाजी क्षेत्रमा रहेको छ । यसको वरिपरि बादलको जमघटले एउटा भिन्नै परिदृश्य देखाउने गर्दछ । यस्तै यसको वरिवरिको जंगल र हरिया बोट बिरुवा र रुखहरुले यसको सुन्दरतालाई थप्ने काम गर्दछ । धेरै वर्ष पहिले चीनका एक सफल किसान जियांग डाकुनले यो ठाउँको नाम तियांजी राखेको बताइन्छ जसको अर्थ स्वर्गको बच्चा वा स्वर्गको टुक्रा हो ।
जंगलको बिचमा हरिया बोटबिरुवा र रुखहरुको बिचमा रहेको यो पहाड निकै अग्लो छ । हरेक वर्ष हज्जारौं मानिसहरु यो अचम्मको ठाउँ हेर्न आउँछन् । यहाँ एउटा पहाडबाट अर्को पहाडमा जानका लागि रोप–वे पनि बनाइएको छ । यस्नेस्कोले यस्सलाई विश्व सम्पदाको सूचीमा राखेको छ ।